10 Kanye In A Lifetime Destinations | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Kanye In A Lifetime Destinations
Ukuhamba Ngezitimela, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Qeqesha Ukuhamba eJapan, Qeqesha Ukuhambela ENorway, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Russia, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izikhangibavakashi Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 25/02/2022)
Ehlane, noma phansi endaweni enkulu yamakhorali emhlabeni, ngaphansi kwezibani zaseNyakatho, lezi yizo 10 izindawo oya kuzo kanye empilweni. Ngakho, uma ufuna i-adventure ongasoze wayikhohlwa eKenya, noma kuphi phakathi kweMongolia neMoscow, khona-ke kufanele uhlole lezi zindawo.
1. I-Maasai Mara National Reserve, Kenya
Enye yezindawo zokugcina zasendle nezingamaqhawe emhlabeni jikelele, I-Masai Mara National Reserve iyindawo oya kuyo kanye empilweni yakho yonke. Akuthintwa impucuko, I-Masai Mara iyindawo ehamba phambili ye-safari. Ngaphezu kwalokho, le isiqiwu semvelo iyikhaya labantu abaningi abafudukayo emhlabeni, eshiya uphawu kuzo zonke izivakashi. Ngakho, ukubona ukufuduka okukhulu; amakati zasendle, amadube, nezinye izilwane zasendle eziningi eziqhele ngamamitha ambalwa nje endaweni yazo yemvelo ebabazekayo kuyinto eshintsha ukuphila..
Ngakho, uma ufisa ukwenza uhambo olushintsha impilo kwenye yeziqiwi zemvelo eziphefumulayo emhlabeni, ungakhetha phakathi kokuhambela phezulu esibhakabhakeni ngebhaluni lomoya oshisayo noma nge-4X4. Nokho, kufanele uhlele iholide lakho le-safari phakathi kukaJulayi noSeptemba, ukuze ubone imihlambi yezilo zasendle ezimangalisa kakhulu ezibusa imigwaqo nezwe laseKenya, ngesikhathi sokufuduka.
2. Kanye In A Lifetime Destinations: I-Macchu Picchu
Icashe eziNtabeni zase-Andes, Ilahliwe kodwa ingakhohlwa idolobha laseMachu Picchu. Izinsalela ezinhle zombuso wama-Inca ziqinile phakathi namakhulu eminyaka esimo sezulu sasendle, ilungele ukwabelana ngezimfihlakalo zombuso wasePeru ezinkulungwaneni zezivakashi ezifika nsuku zonke, ngonyawo, ibhasi, kanye nesitimela.
Lapho uvakashela i-Machu Picchu, uzodidwa ubukhulu nendawo yedolobha lasendulo. Yeka ukuthi leli dolobha elikhulu lakhiwa futhi lalondolozwa kanjani endaweni engenalutho ePeru, ihlala iyimfihlakalo. Nokho, imfihlakalo enkulu ukuthi kungani izakhamuzi zashiya i-Machu Picchu. Ngakho, wamukelekile kakhulu ukujoyina izinkambo eziningi eziqondisiwe ezakhiweni bese uzama ukuthola. Ngaphezu kwalokho, uzoba nokubuka elinye lamasiko nezindawo ezithakazelisa kakhulu emhlabeni. Ngakho, qiniseka ukuthi ubhukha uhambo lwakho lokuphila kanye lokuya e-Machu Picchu ASAP 2022.
3. Isitimela iTrans-Mongolian sisuka eMoscow siya eMongolia
Izindawo ezimbili ezimangalisayo emhlabeni wonke yiSiberia neMongolia. Sibonga ezokuthutha ngezitimela zesimanje, namuhla umuntu angahambela kokubili ngohambo olulodwa, ngesitimela saseTrans-Mongolian. Ukusuka eMoscow, ngeSt. Petersburg kanye neChibi iBaikal, I-Gobi Desert, futhi ufika eBeijing, i-Trans-Mongolian iwuhambo olumangalisayo.
Ngeke nje ube nemibono emangalisayo efasiteleni lakho esitimeleni, kodwa uzoba nethuba elingandile lokuwela 6 izindawo zesikhathi. Nakuba lokhu kungenye ye ukugibela isitimela eside kunazo zonke emhlabeni, iTrans-Mongolian uhambo lwesitimela kufanelekile ukuthatha. Ngakho, uma ufuna i-adventure eshintsha impilo, kufanele uqale ukuhlela uhambo lwakho oluya kule ndawo oya kuyo kanye empilweni yehlobo elizayo.
4. Kanye In A Lifetime Destinations: Tromso, eNorway
Ukuhlangana ne-Aurora kuyinto eshintsha impilo futhi indawo engcono kakhulu yalo mhlangano oyingqophamlando isedolobheni laseTromso.. Enhliziyweni ye-aurora zone, e-Norwegian Arctic, ungabona imibukiso ye-polar emangalisa kakhulu emhlabeni. Izivunguvungu, imisebe, amakhethini, futhi ukucwayiza kokukhanya kwemvelo kuwukubonakaliswa kwezibani ze-polar, kubonakala kuphela ezindaweni eziphakeme, njengezifunda ze-Arctic ne-Antarctic.
Vele 5.5 amahora ukusuka eLondon ngesitimela, le ndawo oya kuyo kanye empilweni yakho ifinyeleleka kalula. Indawo yayo emaphakathi emangalisayo, ama-pubs amahle, nezindawo zokudlela ziheha abahambi abavela kuwo wonke umhlaba. Isikhathi esingcono kakhulu sokufeza iphupho lakho libe ngokoqobo ngoDisemba kuya kuMashi ukuze uthole ukubukwa okungcono kakhulu kwe-Northern Lights e-Norway.
5. E-Bali, I-Indonesia
I-Tropical, luhlaza okotshani, ezolile, I-Bali iyipharadesi emhlabeni futhi ingenye ephezulu 5 izindawo oya kuzo kanye empilweni. Ikhaya lamathempeli asendulo, Isiko Balinese, emangalisayo iholide eco-friendly ukuqasha, kanye nendawo yokuhlala, ngemibono emangalisayo, I-Bali iyindawo yokuvakasha engenakulibaleka.
Ngakho, abahambi abaya e-Bali bathola ukubukwa okumangalisa kakhulu nomoya emhlabeni, ingasaphathwa eyomhlaba eshiya umuntu engakwazi ukukhuluma futhi ethukile phambi kwemvelo ekhazimulayo. Ngaphezu kwalokho, izigodi eziluhlaza, nezimpophoma umbukwane, dala isithombe esifana nekhadi lokuposa kanye nendawo lapho bonke bafuna ukuya khona, okungenani kanye empilweni.
6. Kanye In A Lifetime Destinations: IGreat Barriers Reef, Australia
Ezelula 900 iziqhingi nangaphezulu 2000 km, the great barrier reef e-Australia iyindawo ephuphile yanoma yimuphi umtshuzi kanye nomthandi we-snorkeling. I-coral reef emangalisayo iseQueensland, lapho ungabona khona 1500 izinhlobo zezinhlanzi, izilwane ezimangalisayo, namakhorali amahle.
IGreater Barrier Reef iyizwe lezimanga elingaphansi kolwandle. Ngakho, uma unenhlanhla, usengabona izidalwa zangaphambi komlando zibhukuda eduze kwakho. Ngakho-ke, izikhwama zakho, i-snorkeling noma i-scuba diving gear, ohambweni lwakanye empilweni oluya eGreat Barrier Reef e-Australia.
7. eKhaphadosiya, igalikuni
Ukugibela ibhaluni lomoya oshisayo phezu kweKaphadosiya eTurkey kuwuhambo olujabulisayo. Ngaphezu kwalokho, ngenkathi usemoyeni, uzobona amanye amabhaluni omoya oshisayo anemibala kanye nezwe lentaba-mlilo laseKapadosiya. Nokho, uma wesaba izindawo eziphakemeyo, bese ubuka amabhaluni omoya oshisayo egumbini lakho lehhotela noma ikhefi yangaphandle, kuzoba yinto engingasoze yalibaleka.
Ngaphezu kokujaha kwe-adrenaline yokuba semafwini, uzobona ubuhle bezwe eliyingqayizivele laseKhaphadosiya. Ngokwesibonelo, isigodi sezindela sigcwele amatshe amise okweshimula agxumeka ezweni lonke. Ngaphezu kwalokho, amakhaya eNkathi Yethusi namasonto aqoshwe ezintabeni, yizindawo ezimangalisayo ongavakashela eKhaphadosiya. Ukukufingqa, IKhaphadosiya iyikhaya lezindawo ongeke uzibone kwenye indawo emhlabeni.
8. Kanye In A Lifetime Destinations: Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland
Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland ayindawo ongenakulibaleka nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, kodwa ebusika zinhle ngokukhethekile. Ngenkathi entwasahlobo nasehlobo ungajabulela ukuhamba ngezinyawo kanye nemidlalo yangaphandle, ebusika kufanele uzame i-snowshoeing. Yebo, i-snowshoeing wumdlalo wasebusika oyingqayizivele, kanye nezicathulo ezifanele, ungakwazi ukuhlola kabanzi i-Alpine landscape.
Umdlalo wasebusika oyingqayizivele waqala nxazonke 6,000 eminyakeni edlule futhi isithandwa kakhulu ezintabeni zaseSwitzerland ezineqhwa. Ukusuka e-Chamonix nase-Mont Blanc kuya e-Ecrins National Park, ungakwazi ukujabulela ukubukwa kwentaba ebabazekayo kakhulu ngenkathi uhamba ngeqhwa. Ngamafuphi izinto, i-Swiss Alps yaziwa njengendawo yohlu lwamabhakede, kodwa i-snowshoeing ikwenze kwaba enye yazo 10 izindawo oya kuzo kanye empilweni.
9. Patagonia, E-Argentina
Izinguzunga zeqhwa, iziqongo zezintaba ezinhle, amahlathi, amachibi ahlanzekile, IPatagonia e-Argentina iyipharadesi lokuqwala izintaba. Ngaphezu kwalokho, egcwele imizila nokubukwa okumangalisayo, iNational Glacier park yasePatagonia iyindawo eyake yaba khona empilweni yakho yonke eNyakatho Melika..
Ngaphezu kwe izindlela zakudala zokugibela izintaba, abahambi abanobusha kakhulu bangakhuphuka i-Rio Negro glacier, Ngokwesibonelo. Ngamanye amazwi, ungazithola ukhuphuka endaweni eyiqhwa, intaba eneqhwa ye-adrenaline nolwazi oluyingqayizivele. Lokhu kungenye yezinto ezingajwayelekile ongayenza ePatagonia emangalisayo.
10. Kanye In A Lifetime Destinations: Japan
Esikhathini esithile phakathi kuka-March no-April i-Japan iqhakaza izimbali ezinhle ezibomvana nezimhlophe. I-Sakura iqhakaza imibala yaseKyoto, Tokyo, kanye namanye amadolobha endaweni yomlingo nenjabulo. Kuyathakazelisa ngokungenakuphikwa, ngesikhathi sokuqhakaza kwe-Sakura, I-Japan ifikelwa ubuthongo, ukuzola okukhethekile kuhlanganisa impilo eshesha kakhulu e-Japan. Lesi simo esiyingqayizivele siheha izigidi zezivakashi ezivakashela eJapane ngeholide lasentwasahlobo.
Ngakho, uma uthola ithuba lokuhamba ibanga elide isikhathi somlingo, khona-ke intwasahlobo eJapane yisikhathi esihle sokuvakashela. Ngaphezu kokuzama ukudla kwasendaweni, ukuvakashela amathempeli egolide, kanye namabhilidi aseTokyo ahlaba umxhwele, ukuba nepikiniki ngaphansi kwezihlahla ze-Sakura kuyinto eyenzeka kanye empilweni yakho yonke.
Thina ku Londoloza Isitimela uzokujabulela ukukusiza uhlele uhambo lokuya kulezi 10 Kanye In A Lifetime Destinations emhlabeni wonke.
Ingabe uyafuna ukushumeka iposi lethu lebhulogi elithi “Izindawo Ezingu-10 Kanye Ngesikhathi Sempilo Yonke” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fonce-lifetime-destinations%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba eJapan, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Russia, Qeqesha Ukuhamba Spain, Qeqesha Ukuvakasha UK, Train Travel USA, Izikhangibavakashi Europe